Wararka - Sahayda Korantada Danab ee Sare ee Suuqa Beedka Korontada
Sahayda Awoodda Xoogga ee Sare ee warbixinta cilmi -baarista Suuqa Korontada Beam waxay daraasaysaa heerka suuqa, muuqaalka tartanka, cabbirka suuqa, saamiga, heerka kobaca, isbeddellada mustaqbalka, wadayaasha suuqa, fursadaha, caqabadaha
Ujeeddada ugu weyn ee warbixintan ayaa ah in laga caawiyo adeegsadaha sidii uu u fahmi lahaa suuqa marka la eego qeexitaankiisa, kala qaybintiisa, kartida suuqa, isbeddellada saamaynta leh, iyo caqabadaha uu suuqa kala kulmayo 10 gobol oo waaweyn iyo 50 dal oo waaweyn. Baadhitaano iyo falanqayn qoto dheer ayaa la sameeyay intii lagu jiray diyaarinta warbixinta. Akhristayaasha ayaa ka heli doona warbixintan mid wax tar u leh fahamka suuqa si qoto dheer. Xogta iyo macluumaadka ku saabsan suuqa waxaa laga soo qaatay ilo lagu kalsoon yahay sida mareegaha, warbixinnada sannadlaha ah ee shirkadaha, joornaalada, iyo kuwa kale waxaana baaray oo ansaxiyey khubarada warshadaha. Xaqiiqooyinka iyo xogta ayaa lagu metelay warbixinta iyadoo la adeegsanayo jaantusyada, garaafyada, jaantusyada, iyo matalaad kale oo sawirro ah. Tani waxay kor u qaadeysaa matalaadda muuqaalka waxayna sidoo kale ka caawineysaa fahamka xaqiiqooyinka si aad u fiican.
Qodobbada warbixinta gudaheeda lagu gorfeeyay ayaa ah kuwa ugu waaweyn suuqa ee ku lug leh suuqa sida ciyaartooyda suuqa, alaab -qeybiyeyaasha, alaab -qeybiyeyaasha qalabka, adeegsadayaasha ugu dambeeya, ganacsatada, qeybiyeyaasha iwm. Awoodda, wax -soo -saarka, qiimaha, dakhliga, kharashka, guud ahaan, guud ahaan, mugga iibka, dakhliga iibka, isticmaalka, heerka kobaca, soo dejinta, dhoofinta, bixinta, xeeladaha mustaqbalka, iyo horumarka farsamada ee ay sameynayaan ayaa sidoo kale lagu daray warbixin. Warbixintan ayaa lagu lafa guray taariikhda xogta 12 sano iyo saadaasha. Qodobbada kobaca ee suuqa ayaa si faahfaahsan looga hadlay oo si dhammaystiran loogu sharraxay isticmaalayaasha kala duwan ee suuqa. , iyo cilmi -baaris caadadeed ayaa lagu dari karaa iyadoo la raacayo shuruudaha gaarka ah.Warbixintu waxay ka kooban tahay falanqaynta SWOT ee suuqa. Ugu dambayntii, warbixintu waxay ka kooban tahay qaybtii gunaanadka inta fikradaha khubarada warshaduhu ku jiraan.
Warbixintu waxay daboolaysaa Saamaynta Coronavirus COVID-19: Tan iyo markii uu dillaacay fayraska COVID-19 bishii Diseembar 2019, cudurku wuxuu ku fiday ku dhawaad ​​waddan kasta oo adduunka ah iyadoo Ururka Caafimaadka Adduunka uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo caafimaad dadweyne. Saamaynta caalamiga ah ee cudurka coronavirus 2019 (COVID-19) ayaa durba bilaabmay in la dareemo, waxayna si weyn u saamayn doontaa Sahayda Awoodda Korontada Sare ee suuqa Elektron Beam sannadka 2021. Dillaaca COVID-19 wuxuu saamayn ku yeeshay dhinacyo badan, sida baajinta duulimaadka; mamnuucidda safarka iyo karantiilidda; makhaayadaha waa la xiray; dhammaan dhacdooyinka gudaha/dibedda waa la xaddiday; in ka badan afartan dal ayaa lagu dhawaaqay xaalad degdeg ah; gaabis weyn oo ku yimid silsiladda sahayda; isbedbedelka suuqa saamiyada; kalsoonida ganacsiga oo hoos u dhacda, argagax sii kordhaya oo dadka dhexdiisa ah, iyo hubin la’aanta mustaqbalka.
Waqtiga dhejinta: May-14-2021
Awoodda Awoodda Isbeddesha, Led Strip Light Power Supply, Led Strip Light transformer, Awoodda Awoodda La -habeeyay, Awooda Korantada Dc, beddelidda korontada hab hab,